केही बर्षअघि नेपालका २ ठूला राजनीतिक दलहरु एक सुत्रमा बाधिएपछि दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा स्थापित भए । जसले कम्युनिष्ट राष्ट्रलाई खुसी दियो तर एकता लामो समय टिकेन ।
माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता भएको २०७५ जेठ ३ गतेपछि २०७८ सम्म मात्र २ दल शान्तीसाथ रहन सके । २०७८ मै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खोसिएर दुवै दल पुरानै हैसियतमा आए ।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको पूरा परिणाम नआउँदै सत्ता गठबन्धन भत्किन लागेको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको चर्चा पनि चलेको छ। एमालेको नेतृत्व तहबाट नै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको माओवादी केन्द्रनिकट उच्च स्रोतको दाबी छ । तर, दाहालले भने एमाले नेतृत्वलाई आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि अहिलेको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नरहेको जवाफ दिएका छन् ।
उनले पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउनको लागि अहिले षड्यन्त्र भैरहेको पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु नहुँदै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले पनि दाहाललाई यो गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन ? कतै कांग्रेसलाई धोका दिने हो कि ? भन्दै गठबन्धनको भविष्यबारे सुनिश्चितता खोजेका थिए ।
भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा कांग्रेसका नेताहरुले दाहालसामू यस्तो प्रश्न गरेका थिए । त्यतिखेर पनि दाहालले आफू गठबन्धनप्रति ईमानदार बनेको भन्दै विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच अनौपचारिक गठबन्धन !
बिस्तारै एमाले छाड्नेको संख्या बढ्न थाल्यो: गोरखाका अध्यक्ष नै माओबादी केन्द्रमा प्रवेश
बालुवाटार पुगे प्रचण्ड, देउवासँग के कुरा भयो ?